Sarimiaina fohy Dijaawa Wotunnöi manampy amin’ny famelomana indray ny fiteny Yekuana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Marsa 2019 5:27 GMT
Vakio amin'ny teny English, Aymara, Ελληνικά, Français, русский, Esperanto , Italiano, 简体中文, عربي, Português, नेपाली, bahasa Indonesia, Español
Pikantsary avy amin'ny sarimiaina ao amin'ny YouTube.
Anganongano fahagolan'ny Yekuana, vahoaka vazimba miaina tao Venezoelà sy Brezila, ary navadika ho filma sarimiaina fohy notontosain'i Saúl Kuyujani López ny Dijaawa Wotunnöi.
Natao tamin'ny fiteny Yekuana manontolo ny filma ary manana dikantsoratra amin'ny teny espaniola. Yekuanas maro no nandray anjara tamin'ny tetikasa amin'ny maha-mpandika teny sy mpikaroka azy ireo, sady nandray anjara ihany koa tamin'ny fanomezana feo ireo olona nampiainina ao anatin'ny filma. Ao anatin'ny ekipam-pamokarana ihany koa ny mpanoratra ity tantara ity.
Azavain'ny angano moa ny maha-taranaka ramanavy ny vahoaka Yekuana. Mivelatra eo amin'ny tantaran'i Kawashidi, lehilahy Yekuana iray izay novonoin'ny fanahy ratsy ny vadiny ary avy eo nihantsy azy sy nitsapa ny haranitan-tsainy ny ampahany amin'ny fanazavana.
Nandrakitra ny angano araka izay ilazana ao ao amin'ny vondrom-piarahamonin'i Santa María de Erebato, miorina amondreniranon'i Caura (Alto Caura) ao amin'ny fanjakana Bolivar ao Venezoelà i Saúl Kuyujani López.
Araka ny fanisam-bahoaka tamin'ny taona 2011 tao Venezoelà, miisa 7.997 ny isan'ny Yekuanas miaina ao amin'ireo fanjakana ao Amazonas sy Bolivar. Ny fanisam-bahoaka tao Brezila tamin'ny taona 2000 no mandrakitra ny isan'ny Yekuanas ho 430 ao amin'io firenena io.
Alahatry ny Sarintany Atlas UNESCO ifarimbonana momba ny Teny tataovan-doza manerantany ho fiteny marefo ny Yekuana. Milaza ny mpampianatra Yekuana fa maro amin'ny ray aman-dreny no mametraka ho zava-dehibe ny fampitana ny fiteny ho an'ny taranaka hoavy. Maro ireo mitondra ny zanany ho any an-tanandehibe mba hahaizan'izy ireo teny espaniola tsara. Vokatr'izany dia tsy mahay ny fitenin'ny fianakaviany ny ankizy.
Noho izay antony izay, kendren'ny sarimiaina Dijaawa Wotunnöi ny hitehirizana ny toetra ara-pitenenan'ny fiteny Yekuana amin'ny alalan'ny endrika haino aman-jery.
Novokarin'ny Creaser Creative Studio ny filma ary notohanan'ny Indigenous Organization of the Cayu Kuyujani Basin sy ny Tsenan-dresaka Humboldt. Notontosaina tao amin'ny Humboldt Forum tao Berlin, Alemaina tamin'ny jolay 2017 ny fijerena ity sarimihetsika ity voalohany.
Voafantina ho ao amin'ny fandaharana ofisialin'ny Fetiben'ny Filma sy Fifandraisana Iraisampirenena faha-13 an'ny Vahoaka Vazimba/Tompotany (FICMAYAB), izany notontosaina tao Goatemalà tamin'ny oktobra 2018 ny sarimihetsika fohy. Notontosaina tao amin'ny Fetiben'ny Filma Vazimba an'i Venezoelà tamin'ny novambra 2018 ny fandefasana azy voalohany tao amin'ny firenena.